Cadastral नम्बर - एक सिद्ध ठगी सुरक्षा
Cadastral नम्बर - 2013 मा Realtors को दैनिक जीवन मा देखा जो आधुनिक अवधारणा। बिक्री, दान वा विनिमय अल्फान्यूमेरिक मूल्य प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुनेछ कि यो कुनै पनि अचल सम्पत्ति कारोबार गर्न यो बिन्दु हो किनभने परिसंचरण मा यसको परिचय को मिति, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
यो एक विशिष्ट सुविधा यो रूसी संघ को क्षेत्रमा बारम्बार छैन भन्ने छ। यो हरेक निश्चित संख्या लागि ठीक एक निश्चित भाग निहित भन्ने हो। यसलाई सधैंभरि एक अचल सम्पत्ति तोकिएको छ किनभने परिणामस्वरूप मूल्य हुन सक्दैन, परिवर्तन गर्नुहोस्।
स्वाभाविक, कानून जहाँ cadastral नम्बर प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ अवस्थामा लागि प्रदान गर्दछ। यस प्रकारको को अवस्थामा एक पुरा र indivisible एकाइ रूपमा सम्पत्ति विनाश समावेश हुन सक्छ। यस्तो घटनाहरू जहाँ एक खण्ड विभाजन गरिएको छ अवस्थामा समावेश हुन सक्छ दुई फरक, वा धेरै भूमि पार्सलहरू एक मा मर्ज गरियो। त्यसपछि सम्पत्ति परिवर्तन छ, र यो एक नयाँ अल्फान्यूमेरिक मूल्य तोकिएको छ।
Rosreestr - शरीर cadastral दर्ता को, रूस को क्षेत्र मा अवस्थित, यसको दर्ता को निर्णय संग cadastral पार्सल नम्बर दिन्छ। यो अल्फान्यूमेरिक मूल्य एक कारण को लागि तोकिएको, तर पेश कागजातहरूको आधारमा कि अचल सम्पत्ति विभिन्न प्रकारका लागि अद्वितीय हुनेछ। त्यसैले, आदेश ठीक देशमा दर्ता गर्न, यो आवश्यक भूमि सर्वेक्षण व्यापार प्रदान गर्न छ। एकै समयमा, संरचना दर्ता वा संरचना कागजात गर्न आवश्यक निर्णय - प्रौद्योगिकी योजना।
यस्तो व्यवस्था को उद्भव को मुख्य लाभ त्यहाँ अचल सम्पत्ति लागि राहदानीको कागज संस्करण प्रदान गर्न कुनै आवश्यकता छ भन्ने छ। Cadastral संख्या जो जनसंख्याको हातमा कागजातहरू संख्या कम भन्ने हो रूसी दर्ता, भण्डारण गरिनेछ, यो विनिमय, दान वा भवन वा भूमि जमीन जायदाद को बिक्री प्रक्रिया सरल। दुवै पक्ष अब तिनीहरूले बिक्री वा खरिद छन् के नियन्त्रण गर्नेछ: एकै समयमा यस प्रक्रियाको पारदर्शिता बढाउँछ। अनिवार्य दर्ता को परिचय ठगी को प्रतिशत कम र सफा र इमानदार सम्झौता सञ्चालन गर्न मद्दत गर्नेछ।
दर्ता बाड वा संरचना मा तोकिएको संख्या, निम्न मानहरू समावेश गर्न निश्चित हुन:
Cadastral जिल्ला - एक क्षेत्र, साथै रूसी संघ, को विषय जो बाहिर भूमि दर्ता लगे।
Cadastral क्षेत्र - एक भन्दा कम प्रशासनिक क्षेत्र, अझै पनि लेखा को सानो एकाइहरु जहाँ देश विषयको भाग।
Cadastral चौथाई - यो सानो सहर समावेश क्षेत्र छ। वस्तु accommodates जो सानो लेखा एकाइ, सीधा रेकर्ड गरिएको छ।
पासपोर्ट मा निहित हालैको मान cadastral नम्बर हो।
यी सबै मानहरू सँगै यो सम्भव देश को क्षेत्रमा बारम्बार छैन कि एक अद्वितीय संयोजन सिर्जना गर्न बनाउन। यो सुरक्षा यसरी ठगी परहेज, को वस्तुहरु सबै लेनदेनको ट्रयाक राख्न सम्भव बनाउँछ। निस्सन्देह, यो स्थानान्तरणका र अचल सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया complicates, तर सुरक्षा को यस्तो स्तर सान्त्वना को सानो बलिदान आवश्यक छ।
इटालियन भिसा कागजात। इटालियन भिसा केन्द्र
आवास को लागि सब्सिडी कसरी प्राप्त गर्ने?
कसले र कुन सार्वजनिक परिवहन फाइदाको धारण छ?
युक्रेनमा पेंशन्स। न्यूनतम र अधिकतम पेन्सन
कामबाट निष्कासन: दायाँ सबै गरिरहेको
टिकी: आफ्नो कारण के छ र के हुन्
जब Warm Alexey? यो छुट्टी के हो? यस दिनमा के सम्बद्ध संकेतहरू छन्?
व्यक्तिगत सम्पत्ति कर
बेलारुस मा मूल्यवर्ग। बेलारुस मा मूल्यवर्ग पछि के हुनेछ
सेल्युलाईट: विकास चरण, को कारण र उपचार सुविधा
8 वर्षको लागि केटीलाई के गरौं: आमाबाबुको सल्लाह
प्राचीन चीन को संस्कृति।
बच्चाहरु को लागि pacifiers को प्रकार
Infusorian trumpeter: संरचना, प्रजनन, प्रकृति को मूल्य
Powerade (पेय): लाभ र हानि, संरचना
कसरी धेरै मास्को Kremlin को टावर: सूची विवरण र इतिहास
कीमा बनाएको पोर्क को सरल पकवान